Aquarius Mfazi - Emanzini
Ulwazi ngomfazi wase-Aquarius x
Xa umfazi we-Aquarius ewela eluthandweni, uya kulandela iimvakalelo zakhe ngokude nje engathintelwanga kwaye ekhululekile ukuba yedwa. Uloyiko olungaziyo lokuphulukana nobuntu bakhe kwabanye abantu luhlala lumenza abe sesichengeni kulo naluphi na uhlobo lokulindela kwaye azame ukumjika abe yinto angeyiyo. Sekunjalo, phantse ubomi bonke be-Aquarius besifazane bufika ixesha lokukhula kunye nokuqonda ukuba umlinganiselo othile wothando kufuneka ube nokwaneleyo ukuba abe nentsapho, ukukhulisa abantwana kunye nokunyamekela umyeni wakhe. Oku mhlawumbi yeyona nto inzima kuye ukuba ayenze, kwaye isigqibo esifana nesi kufuneka sihlonitshwe kwaye siqondwe njengesenzo sokugqibela sothando, nangona sibonakala sinengqondo ngokupheleleyo.
Aquarius MfaziUkwabelana ngesondo
Udinga iqabane elinomdla ngokwaneleyo kwaye alikhathaleli kakhulu malunga ne-taboos yoluntu lwanamhlanje. Ukuba ufuna ukubonisa ubulili bakhe ngendlela ethile, mhlawumbi uya kwenza oko nangona uluvo lomntu wonke kwaye kungekhona ngokufihlakeleyo. Ingqondo yakhe enengqondo kwiimeko ezininzi iya kumgcina ekwenzeni imiboniso, kodwa unomdla kakhulu kuzo zonke iintlobo zovavanyo lwesondo kwaye oku kubandakanya isondo sangaphandle kwaye ngamanye amaxesha ukubonakaliswa kobudlelwane obusondeleyo kwiindawo ezingaqhelekanga onokucinga. Akufunekanga abe nendoda enengqondo ephangaleleyo okanye nabani na omjonga njengeladylike.
Uyonwabile, akaqikeleleki, kwaye ayingomntu onokukhetha ukuba naye, ukuba ukhangela ubudlelwane obuzinzileyo, obukhuselekileyo ngaphandle kwamaza kunye nemingeni yeemvakalelo. Akathandi ukubotshelelwa phantsi, nangona uya kwenza nantoni na kwiqabane elifanelekileyo, kwaye ngaphandle kokuba uvakalelwa kukuba iwotshi yakhe yebhayoloji ibeka uphawu, akayi kunikezela kwizinto ezilindelekileyo zobudlelwane. Into ebaluleke kakhulu umntu kufuneka ayikhumbule xa eqala ubudlelwane nalo mfazi, kukuba unokutshayelwa ezinyaweni zakhe kuphela ngentlonipho kunye nokumangalisa okanye ezimbini ngokubuyisela.
Ngaba unokumthembaAquarius Mfazi
Lo ngumbuzo oneempendulo ezimbini ezigqithisileyo. Ukuba ubudlelwane bumenza azive ekhuselekile ngokwaneleyo ukuba avuleke kwaye angene kwidama lakhe leemvakalelo, ngokuqinisekileyo uya kuba ngumntu onokumthemba, ngaphandle kwamathandabuzo. Nangona kunjalo, ngokukhawuleza ukuba ubuntu bakhe busongelwa nangayiphi na indlela, uya kuhlukana, okanye angaxoki nje kuphela, kodwa uyazi kakuhle, athathe uxanduva kwaye azive elungile kakhulu ngayo.
Uphawu lwe Aquarius imele yonke imisebenzi egqithisileyo ukusuka kwiparashute kunye nokutsiba kwe bungee, ukuya kumava okwabelana ngesondo esidlangalaleni. Imfuneko yakhe yokwaphula imithetho ngamanye amaxesha isenokungalawuleki, kungekhona ngenxa yokuba ephumile kulawulo kodwa ngenxa yokuba engafuni ukuba kuyo. Ukuba ukukhuliswa kwakhe kwakuthambile ngokwaneleyo kwaye iimfuno zakhe zahlangatyezwa xa wayesengumntwana, imvelo yakhe yemvukelo ayiyi kuba nzima ukujongana nayo, kodwa inyaniso kukuba, inkcaso yakhe yangaphakathi iya kumtyhala kwicala leyona misebenzi ingaqhelekanga onokuyenza. Cinga nge.
Yiyo loo nto engafuni ukuya kwiintsuku ezintathu ezilandelelanayo, ngakumbi hayi kwindawo yosapho oluthandanayo apho aya kutya ispaghetti. Endaweni yoko, ufuna ukutya okuneziqholo, into ehamba ngeenyawo, ufuna ukuya kwiklabhu, ukudanisa, ukuhlala, ufuna imihla eyothusayo kwaye ihlale ubusuku bonke. Udinga amava amatsha ngalo lonke ixesha, utshintsho, uchulumanco, kwaye akasoze azinze kancinci, kwaye akafanele.
UkuqondaUmfazi wakho we-Aquarius
Uphawu lwe-Aquarius lumelela inkcaso kwaye akulula ukuba lo mfazi alungise ingxabano ephetheyo ngaphakathi, ehlala exelela ukuba inhlonipho yakhe kufuneka ifunyenwe. Usenokungaze aqonde ukuba intlonipho lilungelo alinikiweyo kwaye akuyomfuneko ukuba ayilwele ngalo lonke ixesha. Owona mceli mngeni mkhulu kukufumana uxolo lwangaphakathi, lweemvakalelo, kwaye xa esenzakala amaxesha amaninzi, uyivala ngokulula intliziyo yakhe kwaye aqhubeke nobomi bakhe ukusuka kwindawo engqingqwa.
Aquarius MfaziUkuthandwa nokungathandwa
Ubuhle bokuba kwinkampani yowesifazane wase-Aquarius kukungalindelekanga, indalo yakhe enomdla, imbono yakhe yobuntu kwihlabathi kunye nokuqonda kwakhe izinto abanye abantu abaza kubaleka kuzo. Icala elingelihle kakhulu lokuthandana naye likwicala lakhe elingalindelekanga kwaye alithembekanga kangako, kungekuphela ngenxa yokuba unokufika emva kwexesha ngalo lonke ixesha ufanele ukudibana, kodwa ngenxa yokuba ngamanye amaxesha akunakwenzeka ukwazi ukuba uya kusabela njani kuyo nayiphi na into eyenziwa ngabanye abantu. .
Ungasikhethela Njani Isipho SakhoAquarius Mfazi
Oku kufanele kube lula - mthengele into ongayi kumthengela nawuphi na omnye umfazi. Kubalulekile ukuqonda ukuba phantsi komphandle wakhe ofihliweyo ufihla umfazi wangempela othanda ukumangaliswa yinto enothando kunye nenhle. Oku akuthethi ukuba uya kuphambana malunga neshumi elinesibini le roses ezibomvu okanye isidlo sangokuhlwa sekhandlela, kwaye nangona enokwaneliseka ngokwaneleyo yinto efanayo, kungcono ukuhamba nezipho ezingaqhelekanga ngakumbi. Ukuba ufuna ukukhetha isipho aza kusisebenzisa, khangela izinto zobugcisa anokuzifuna, ngethoni emfusa okanye esilivere. Khetha ukufunda okuhle ngeenkwenkwezi okanye ulungiselele iifireworks njengesikhumbuzo sesikhumbuzo. Unokufumanisa ukuba kulula ngokwenene ukumnika into aya kuyixabisa, ukuba uthembela nje kubuchule bakho nakwimvakalelo yakho yangaphakathi yolonwabo.
Sagittarius Iiary Gemini I-Scorpio Umhlaza
Taurus kunye Aquarius
Ikhadi leTarot leNkwenkwezi
I-Aquarius Horoscope ye-Aquarius
Ikhadi leTarot le-Ace yeSwords